टर्कीमा गयो शक्तिशाली भूकम्प, ठुला घरहरु लडे, धेरै मानिष हताहत ! - Tufan Media News
टर्कीमा गयो शक्तिशाली भूकम्प, ठुला घरहरु लडे, धेरै मानिष हताहत !
११ माघ २०७६, शनिबार १३:०६
टर्कीमा आएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तीमा १८ जनाको निधन भएको छ ।शुक्रबार आएको ६.८ म्याग्नीच्युडको भूकम्पका कारण अरु ५ सय भन्दा बढी घाइते भएका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
टर्कीको राजधानी अङकारादेखि पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने एलाजिग प्रान्तमा स्थानीय समयानुसार शुक्रबार बेलुका ८.५५ मा भूकम्प आएको हो । स्वास्थ्य मन्त्री फहरेटिन कोकाले निधन भएका मध्ये १३ जनाको एलाजिग प्रान्तमा र अरु पाँच जनाको छिमेकी मालात्य प्रान्तमा निधन भएकोे जानकारी दिनुभयो ।
भूकम्पपछि दर्जनौ पटक पराकम्प पनि आएको बताइएको छ । भूकम्पको प्रभाव चार ओटा प्रान्तमा परेको विवरणहरु आएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
सुकुटी बोकेर जापान गयका
डढेलो निभाउन खटाइएको विमान